डा सुवास भट्टराई
फागुन २५, २०७४| प्रकाशित ०७:०४
पहिले-पहिले मोटाउनुलाई निकै गर्वको विषय मानिन्थ्यो। अहिले मोटाउनु मानिसका लागि अभिसाप बन्न थालेको छ। निरन्तर मोटाउँदै जाँदा शरीरमा विभिन्न रोग लाग्ने सम्भावना बढेर जान्छ। मोटोपना भनेको शरीरको तौल बढ्ने हो। नेपालीमा मोटोपना विशेष गरेर शरीरभरि भन्दा पनि पेटमा बढेको देखिन्छ। अव्यवस्थित जीवनशैली र खानपानको उपहार हो मोटोपना र पेटको बोसो। अस्वस्थ जीवनशैली र खानपानले कयौं प्राणघातक रोग निम्त्याउन सक्छ।
मोटोपनाका कारण लाग्ने रोगहरु
४. शरीरको उचाइको अनुपातमा हुनुपर्ने औसतभन्दा बढी तौल हुने । बिएमआई (तौल र उचाइको सूचक) २५ भन्दा बढी हुनुलाई मोटोपनाका रूपमा लिइन्छ। शरीरको तौल केजीलाई उचाइ (सेन्टिमिटर) ले दुई पटक भाग गर्दा आउने अंक (केजी/सेन्टिमिटर२) नै बिएमआई हो। बिएमआई १८ देखि २५ सम्म हुनुलाई सामान्य मानिन्छ। २५ देखि २९.९ भनेको बढी वजन हो। ३० देखि ३४.९ हुनु मोटोपना ग्रेड–१, ३५ देखि ३९.९ हुनु ग्रेड–२ वा अत्यधिक मोटोपना। ४० भन्दाबढी बिएमआई हुनु भनेको माथि उल्लेखित र अन्य प्राणघातक रोगहरू लाग्ने सम्भावना अधिक हुनु हो।
मोटोपना हुने कारण
• खानामा सन्तुलन नमिलाउने हो भने, मोटोपना घटाउन व्यायाम मात्रले सफल नहुन पनि सक्छ । खेलाडीहरूको वजन धेरै हुन्छ, तर उनीहरूको पेट भुक्क उक्सिएको हुँदैन । शरीरको बोसोभन्दा पनि मांशपेशीका कारण उनीहरूको वजन बढेको हुन्छ ।
मोटोपन घटाऊनेे सरल ऊपाय अरुु केेेेकेे हुुन सक्छ??